Fivondronamben'ny Federasiona Ranomasimbe Indiana - ss 2t l0813 zom
Zoma 24 May
Vakio ireto andalan-teny fanazavana manaraka ireto dia mifanakaloza hevitra hoe ahoana no anampian’izy ireo antsika hahatakatra tsara kokoa ireo hafatra nentin’i Habakoka.
“Misy valiny ny fanontanian’i Habakoka. Tsy valin-teny amin’ny lafiny fisainana anefa izany fa valin-teny amin’ny alalan’ny toe-javatra mitranga. Hiseho ny valin-tenin’Andriamanitra, saingy tsy hay lazaina amin’ny teny izany. Tena azo antoka fa ho avy ilay valin-teny; ‘raha toa mitaredretra izany, andraso ihany.’ Marina fa mafy, tsy zaka, ny fiandrasana satria mampihoron-koditra ny marina ny zavatra hitany. Izao no valin-teny lehibe omena ho setrin’izany: ‘Fa ny marina ho velon’ny finoana.’ Mbola valin-teny tsy amin’ny lafiny fisainana indray izany fa valin-teny amin’ny lafiny fisiana. Ny finoana ara-paminaniana dia fahatokiana Azy ka ny fahatoniana eo anatrehany dia endrika isehoan’ny fahafantarana (‘compréhension’).” — The Prophets, Abraham J. Heschel, t. 143.
“Tsy maintsy mamboly sy mikolokolo ny finoana izay nanaovan’ny apostoly sy ny mpaminany fanambarana isika, - dia ilay finoana mamikitra amin’ny teny fikasan’Andriamanitra; ary miandry ilay fanafahana amin’ny andro voatendriny sy araka ny fombany ary araka ny fahatanterahana efa nampanantenaina. Ho tanteraka amin’ny fiaviana amim-boninahitry ny Mpamonjitsika, Mpanjakan’ny mpanjaka sy Tompon’ny tompo, ny teny azo antoka avy amin’ny faminaniana. Toa mety tsy hanam-pahataperana ny fiandrasana, ary mety ho reraky ny fitsapana mahaketraka ny fanahy, mety ho potraka eny an-dàlana ireo olona nametrahantsika fitokisana; kanefa miaraka amin’ny mpaminany (Habakoka) izay niezaka namelombelona ny fanantenan’ny Joda tamin’ny ora manjombona indrindra nisehoan’ny fihemorana no tsy maintsy hiantsoantsoantsika hoe: “Jehovah dia ao amin’ny tempoliny masina: mangina eo anatrehany, ry tany rehetra.” — MM, t. 320.
- Fintino ny resaka nifanaovan’i Habakoka tamin’Andriamanitra. Inona no fototry ny fitarainany? Inona no nasetriny ny valin-tenin’Andriamanitra?
- Eo imason’Andriamanitra, mety ho toe-tsaina azony ekena kokoa avy amin’ny mpivavaka ve ny fametrahana fanontaniana amin-kitsim-po na ny fisalasalana mihitsy koa aza, toy izay ny finoana ivelambelany fotsiny? Porofoy ny valin-teninao.
- Nino avokoa ireo Advantista mitandrina ny andro fahafito tamin’ny taranaka teo aloha fa efa tokony ho tonga talohan’izao fotoana ankehitriny izao i Kristy, ary efa tokony ho nahita ny fahatanterahana fara-tampon’ireo teny fikasana mahafinaritra rehetra ireo izy ireo. Isika taranaka ankehitriny kosa, fomba ahoana no ianarantsika mihazona ny finoana raha mbola eo am-piandrasana ny fiverenany isika?